Clọ ọrụ na-emepụta ike - China Power Cable Manufacturers, Suppliers
A na-ejikarị eriri fluoroplastic arụ ọrụ ụlọ ọrụ dịka njikwa na usoro mmesho akpaaka, ọkụ eletrik, Automotive na Aerospace. N'ihi ezigbo nguzosi ike nke okpomọkụ, nguzogide kemịkal na ike igwe na nke ọkụ eletrik, eriri Teflon ndị a dabara adaba maka ngwa na mgbasa ozi ike na ma ọ bụ na ogo dị elu karịa 105 Celsius.
A na-ejikarị eriri ntụgharị Frequency agbanwe dị ka njikọ njikọta n'etiti ugboro ntụgharị ike ọkọnọ na igwe ntụgharị ntụgharị. A na-ejikwa ya iji nyefe ike na nkesa nkesa nke voltage 1kv ma ọ bụ obere.
Ngwuputa Gịnị na-tinye n'ọrụ na ụdị dị iche iche nke Ngwuputa ngwa na-zubere maka ogologo oge arụmọrụ na kemgwucha obi ọjọọ na gburugburu ebe obibi, mgbe na-enye kasị ukwuu etoju nke nchekwa na arụpụtaghị. Eriri ndị a na-enye mgbanwe dị mma, torsion na ịdọrọ nguzo, na mgbakwunye na elektrọnik pụrụ iche, ọnọdụ okpomọkụ, abrasion na ire ọkụ.
Silicone roba cable bụ ụdị roba roba na ya insulating ihe onwunwe bụ silicone. Silicone roba waya kwesịrị ekwesị maka ịkwaga ma ọ bụ na-edozi eriri ma ọ bụ nnyefe mgbaàmà nke ngwa eletriki na akụrụngwa nwere akara voltage 450 / 750v ma ọ bụ n'okpuru. USB nwere ezigbo nkwesi ike nke ọkụ. Igwe silicone na-agbanwe agbanwe nwere ike ime ka arụmọrụ eletriki dị mma na ịdị nro na ọnọdụ dị elu, obere okpomọkụ na gburugburu ebe obibi. Silicon roba Gịnị bụ ndị kwesịrị ekwesị iji na electric powe ...
Okwu Mmalite Ngwaahịa a kwesịrị ekwesị maka kọmputa kọmputa na eriri njikọ akpaaka na voltage nke 500v gosipụtara na n'okpuru nke chọrọ nguzogide nnyonye anya dị elu. Kọmputa USB Ọnụ ahụ na-anabata ụdị K nke ụdị b-nke dị ala polyethylene nke nwere nkwụsị oxidation. Polyethylene nwere mkpuchi mkpuchi dị elu, ezigbo ikike na-eguzogide voltage, obere ọnụọgụ ọnụọgụ na obere ọnwụ dielectric na ọnọdụ mgbanwe na-agbanwe agbanwe. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị izute chọrọ nke nnyefe perf ...
A na-etinye eriri ọla kọpa a na-eji ọla kọpa ekpuchi PVC a na-ekpuchi ekpuchi-ekpuchi eriri gburugburu na nnukwu oghere magnetik, na eriri, na pipeline, na-eli ozu kpọmkwem, na-atụgharị, ma nwee ike ịnagide oge a na-eme ka esemokwu ka ukwuu.
Igwe eletriki dị elu Igwe eletrik dị elu bụ ụdị eriri ike, nke na-ezo aka na eriri ike ejiri iji nyefee n'etiti 10kv-35kv (1kv = 1000v), a na-ejikarị ya eme ihe n'okporo ụzọ isi nke nnyefe ike. Implementationkpụrụ mmejuputa ngwaahịa maka eriri eriri ọkụ bụ gb / t 12706.2-2008 na gb / t 12706.3-2008 ofdị eriri eriri akwa Thedị isi nke eriri igwe dị elu bụ eriri yjv, eriri vv, eriri yjlv, na vlv USB . yjv USB aha zuru XLPE gwara mmanụ ịkwanyere sheathed ike USB (ọla kọpa isi) ...
Jiri njirimara 1. Igwe kachasị elu nke onye na-eduzi eriri bụ 90 Celsius. Mgbe obere oge (oge kachasị ogologo anaghị agafe 5S), nke kachasị elu Ọnọdụ okpomọkụ anaghị agafe 250 Celsius C. 2. Igwe ikuku dị jụụ mgbe ị na-etinye eriri ekwesịghị ịdị ala karịa 0 Celsius C 3. Kwekọ ekwe ekwe ekwe n'oge ịtọgbọ: otu-isi eriri bụ ihe na-erughị 15 ugboro na mpụta dayameta nke USB; Multi-core USB abụghị ihe na-erughị 10 ugboro na mpụta dayameta nke eriri. Model aha ojiji condit ...
Dọrọ eriri USB
Dọrọ eriri USB Mgbe akụrụngwa akụrụngwa ga-agagharị na ihu, iji gbochie eriri ndị ahụ ịdọkọrịtara, eyi, wepụ, kwụ ọtọ ma gbasasịa, a na-etinye eriri ndị ahụ na eriri drọ USB iji chebe eriri ahụ, na USB nwekwara ike ịkpali azụ na-apụta na ikpuru yinye. A pụrụ iche elu-mgbanwe USB na ike na-eso ikpuru yinye ịkwaga na-apụta na-enweghị mfe eyi a na-akpọ ikpuru yinye USB, na-emekarị ọ nwekwara ike na-akpọ ịdọrọ USB, tank yinye ca ...
kvv, kvvp, kvvrp, kvvp2, kvv23, kvv32 Ọla kọpa isi PVC gwara mmanụ na sheathed braided echebekwa akara Gịnị na-tọrọ n'ime ụlọ. Oghere eriri, ọkpọkọ na oge ndị ọzọ achọrọ na-achọ ọta na-adịkarị mma maka ebe nwere nnyonye anya mgbaama dị elu. Modelsdị ndị a na-ejikarị: kvv, kvvp, kvvrp, kvvp2, kvv23, kvv32